ဖူးနုသစ်: အန်ကယ်လ်ဆမ်တို့ဆီမှာ လေယာဉ်ပျံစီးခြင်း
ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတယောက်လဲ Made In USA ရူးဖူးတယ်...။ U.S က သူငယ်ချင်းကို U.S Jean လိုချင်လို့လှမ်းမှာတာ။ ဟိုက ပို ့လိုက်ပါတယ်။ Made In Mexico တဲ့.....။ :P
ဟဲဟဲ ကိုZT Made In USA လက်ဆောင်ပေးဖို့ဝယ်မယ်ဆိုရင် ဟာလီဒေးဗစ်ဆင် ဆိုင်ကယ်မျိုးဝယ်ပေးလိုက်ရင်ရပါတယ်ဗျ ... ဒါပေမဲ့ တရုတ်လုပ် ပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းအချို့ ထည့်ထား မထားတော့ မသိဘူးနော် ...
Made In USA စစ်စစ်တွေတော့ ရှိပါတယ် ... ဈေးပိုကြီးလိမ့်မယ်ဗျ ....
ဖတ်၊ မှတ်သား သွားပါတယ်။
သိပြီ..ဇက်တီကိုလဲ လာလည်ရင် ယူအက်စ်လက်ဆောင် တစ်ဒေါ်လာပေးမယ်။
နောက်တစ်ခါသွားရင် အမေရိကားမြေက မူရင်း ဘာဂါဝယ်ခဲ့ပါ။ ဒါဘဲ။
can you create feeds for your site. I think we can not fetch with feeds reader from phone. Thanks
Made in USA လား။ မျက်လုံးပြာလေးတွေ ရှိတယ်လေ။ :)
Made in Myanmar စပို့ရှပ်တွေ Nine West မှာ တွေ့ဖူးတယ်... random အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်ဆိုချက်ကို သဘောကျတယ်
ကန်ဒေါ်လာကို ခု စီလုပ်မှာ ရိုက်ခိုင်းတာထင်တယ်နော်